wow – Gaming Noodle
Troll တို့ရဲ့သေခြင်းနတ်ဘုရား Loa of death, Bwonsamdi (WoW Lore)
Troll တို့ရဲ့သေခြင်းနတ်ဘုရား Loa of death, Bwonsamdi ကျွန်တော် ရှေ့အပတ်က ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ troll တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ Loa နတ်တွေထဲမှာ Loa of death ဖြစ်တဲ့ Bwonsamdi က ကိုးကွယ်သူနောက်လိုက် အနည်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အဆင့်အနိမ့်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ Loa တွေအတွက် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခံရဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဗျ၊ သူတို့ကို ဘယ်သူမှ ကိုးကွယ်တဲ့သူမရှိတော့ရင် တဖြည်းဖြည်း Loa အစွမ်းတွေပျောက်လာပြီး အမေ့ခံ Loa အဖြစ်နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားကြမှာပါ။ god of sky တွေ god of hunt တွေ အစရှိတဲ့ တခြား Loa တွေအတွက် ကိုးကွယ်သူ မရှားပေမဲ့ …
Troll တို့ရဲ့သေခြင်းနတ်ဘုရား Loa of death, Bwonsamdi (WoW Lore) Read More »
Troll Civilization ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု Loa (သို့) Wild God များ – WoW Lore
Troll Civilization ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု Loa (သို့) Wild God များ World of warcraft သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပထမဦးဆုံး ထွန်းကားခဲ့တဲ့ civilization အကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် troll တွေရဲ့ Zandalari အင်ပါယာကြီး နဲ့ သူတို့ရဲ့ မြို့ပြယဥ်ကျေးမှုကို လက်ညှိးထိုးပြ ရမှာပါပဲ။ Troll တွေဟာ elf တွေနဲ့ လူသားတွေ မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ လောက်ထဲက Azeroth ဂြိုလ်ပေါ်မှာ မွေးဖွားဖြစ်တည် လာခဲ့ကြတာပါ၊ Azeroth ရဲ့နေရာအနှံအပြားမှာ ရွာတွေတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ Azeroth ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပဒေသရာဇ် အင်ပါယာကြီးဖြစ်တဲ့ Zandalari အင်ပါယာကြီးကိုလဲ ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Troll မြို့ပြယဥ်ကျေးမှု …
Troll Civilization ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု Loa (သို့) Wild God များ – WoW Lore Read More »
Shadowlands ရဲ့ Player choice စနစ်ကို ပိုဦးစားပေးသွားမယ့် World of Warcraft
Shadowlands ရဲ့ Player choice စနစ်ကို ပိုဦးစားပေးသွားမယ့် World of Warcraft ကျွန်တော်တို့ gamer တွေ အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ game တွေမှာ အတွေ့များလာရတာကတော့ Player Choice System ပါပဲ။ Player တွေဟာ မိမိတို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပေါ် မူတည်ပြီး story line တွေ ကွဲသွားမယ်၊ ကြားထဲက အကြောင်းအရာတွေ၊ ending တွေ ကွဲသွားမယ်၊ ကိုယ်ပိုင် story telling လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ gamer တွေအတွက် သည်းခြေကြိုက်အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု World of Warcraft: Shadowlands မှာလဲ ဒီ player …
Shadowlands ရဲ့ Player choice စနစ်ကို ပိုဦးစားပေးသွားမယ့် World of Warcraft Read More »
Free ကစားလို့ရမယ့် MMORPG ဂိမ်း Kritika:REBOOT အကြောင်း ပျော်စရာတွေ ယူဆောင်လာပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ! GODLIKE Kritika: REBOOT ဂိမ်းဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး Beta Test တွေ၊ Data Reset ချတာတွေ မပါဘဲ အပြည့်အဝ ရှေ့ဆက်သွားတော့မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် စစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတဲ့ Kyrenos တိုင်းပြည်ကနေ သဘာဝလွန် စွန့်စားခန်း ခရီးနှင်ဖို့ သင့်ရဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေကို ခေါ်ထားလိုက်ပါတော့။ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ Dungeon တွေကို ကျော်ဖြတ်ရင်း အလွန်အမင်း ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခံစားနိုင်ဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဆာဗာ စဖွင့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ကစားသူတွေအတွက် …
Free ကစားလို့ရမယ့် MMORPG ဂိမ်း Kritika:REBOOT အကြောင်း Read More »
အပြောင်းအလဲကောင်းတွေနဲ့ Warcraft ရဲ့ Era အသစ် Shadowlands
အပြောင်းအလဲကောင်းတွေနဲ့ Warcraft ရဲ့ Era အသစ် Shadowlands Mmorpg ဂိမ်းတွေရဲ့ ဘုရင်တဆူလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ world of warcraft အတွက် ၉ခု မြောက် expansion အနေနဲ့ Shadowlands expansion ကို launch လုပ်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ဒုတိယပတ်အကုန် တတိယအပတ်ထဲကို ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Blizzard Entertainment. အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ warcraft သက်တမ်း ၁၆နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အပြောင်းလဲ အကြီးကြီးတွေကို ဒီ Shadowlands expansion ထဲမှာ ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ အရင်က expansionတွေ နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားပေမဲ့ core player တွေ ကြားမှာ …
အပြောင်းအလဲကောင်းတွေနဲ့ Warcraft ရဲ့ Era အသစ် Shadowlands Read More »
[Zawgyi] ၂၀၁၉ အတြင္း ထြက္ရွိလာဦးမည့္ ေကာင္းႏုိးရာရာ PC game မ်ား (part-3) “World of Warcraft Classic” Blizzard ကေန ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွာ ထြက္ရွိလာမယ့္ “World of Warcraft Classic” ဂိမ္းဟာ old-school gamer ေတြအတြက္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ အျမင္မစိမ္းႏိုင္ပါဘူး။ ထြက္ရွိလာမယ့္ ဒီဂိမ္းဟာ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ World of Warcraft (WoW) ဂိမ္း ရဲ႕ စတင္ထြက္ရွိခဲ့စဥ္က မူလအေျခအေနကို ျပန္လည္ခံစားႏိုင္ေအာင္ classic version နဲ႔ ျပန္ထုတ္မယ့္ သေဘာပါပဲ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စလုိ့ အလြန္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီး ေတာက္ပခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို …
၂၀၁၉ အတြင္း ထြက္ရွိလာဦးမည့္ ေကာင္းႏုိးရာရာ PC game မ်ား (part-3) Read More »